मनोरंजन || Radio Nikash 93.4 MHz
समाचार : मनोरंजन
अपाङ्ग तथा अनाथ बालबालिकाको सहयोगार्थ बैशाख १ मा काभ्रे समाज युएईको सास्कृतिक कार्यक्रम
अपाङ्ग तथा अनाथ बालबालिकाको सहयोगार्थ बैशाख १ मा काभ्रे समाज युएईको सास्कृतिक कार्यक्रम उत्तम बिक दुबई २० मार्च, युएईमा रहेका काभ्रेलीहरुको साझा संस्था काभ्रे सेवा समाज युएईद्धारा आगामी अप्रिल १४(२०७४ बैशाख १) मा दुबईको कर्ल्टन होटलमा अपाङ्ग तथा अनाथ बालबालिहरुको सहयोगार्थ "नयाँ बर्षबृहत संस्कृतिक साँझ २०७४” हुने भएको छ ।
कबालीले तोड्यो सलमानको रेकर्ड
रजनीकान्तको हालै रिलिज भएको फिल्म ‘कबाली’ले बक्स अफिसमा राम्रो ब्यापार गर्न सफल भएको छ । भारतीय मिडियाले उल्लेख गरे अनुसार २२ जुलाईमा रिलिज भएको यस फिल्मले विश्वभरवाट ६५० करोड रुपैंया कमाई गरेको छ ।यसको आधारमा भन्न सकिन्छ । कबालीले सलमान खानको अहिलेसम्मको सबै रकम तोड्यो । यो फिल्मले ७०० करोड पार गर्ने आाकलन गरिएको छ ।बलिउडमा अहिलेसम्म राजकुमार हिरानी निर्देशित ‘पिके’ सबै भन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्मको रुपमा चिनिन्छ ।
एजेन्सी\_ यदि तपाईलाई थप एक कप कालो चिया खाने मुडमा हुनुहुन्छ भने निर्धक्क खाए हुन्छ । यो कुनै व्यक्तिगत धारणा नभएर वैज्ञानिकहरुको अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको निष्कर्ष हो । विज्ञहरुका अनुसार कालो चिया बालकदेखि बृद्ध जोकोहीले खाँदा पनि फाइदा हुन्छ । तर कालो चिया भएपनि चिनिको मात्रा कम प्रयोग गर्नुहोला ।
आयो दीपिकाको हलिउड फिल्मको ट्रेलर
बलिउड नायिका दीपिका पादुकोणको हलिउड फिल्म ‘एक्सएक्सएक्स दि रिटर्न अफ जेण्डर केज’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ ।लामो समयदेखि यो फिल्मको चर्चा भारतमा हुँदै आएको थियो । यसै फिल्मवाट दीपिका पादुकोण हलिउडमा प्रवेश गरेकी छिन् ।
सलमानको सुल्तानले आमिरको पिकेलाई पछि पार्ला त ?
सलमान खानको चलचित्र सुल्तानले पाँच सय करोड भारु कमाइ गरेको छ । प्रदर्शनमा आएको १२ दिन भित्रै सलमानको सुल्तानले समग्रमा पाँच सय करोडको व्यापार गरेको हो । योसँगै सुल्तान बढी कमाइ गर्ने भारतीय चलचित्रको सूचीमा पाँचौं स्थानमा पुगेको छ ।
सलमानले ल्याए बक्स अफिसमा सुनामी, यि हुन् ‘सुल्तान’का बीस रेकर्डहरु
सलमान खानलाई बक्स अफिसको सुनामी भन्दा फरक नपर्ला । उनले सुल्तानको साथमा यो कुरा साबित गरेका छन् कि बक्स अफिसमा पैसाको चाङ् लगाउन उनलाई आउँछ । उनले भारतमा पहिलो विकेन्डमा १८०.३६ करोड भारु.को नेट बक्स अफिसमा कलेक्शन गरेका छन्, जबकि ग्रस कलेक्शन २५२.५ करोड थियो । अन्तराष्ट्रिय बक्स अफिसमा ९२ करोडको ग्रस कलेक्शन भयो । यो चलचित्रले कुल ग्रस कलेक्शन ३४४.५ करोड भारु. गर्‍यो ।
काठमाडौँ - बलिउडमा काम पाउन छाडेपपछि नायिका मनिषा कोइराला पछिल्लो समय नेपालतिरै व्यस्त छिन् । व्यवसायी सम्राट दाहालसँग बिहे गरेकी उनको सम्बन्ध एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । पछिल्लो समय फर्सदिलो जीवन विताइरहेकी छीन उनी । वैशाख १२ गतेको भूकम्पछि नायिका कोइरालालाई सरकारले सम्मानित पद दियो, प्रधानमन्त्री राहत कोषको सद्भावदूत बनाएर ।